Zavatra mahaliana ho fantatra momba ny You Are My Spring? - Fialam-Boly
Zavatra mahaliana ho fantatra momba ny You Are My Spring?
Inona izany rehetra izany?
Ny Ainao no loharanoko
Valiny mitsikera ny fampisehoana
Aiza no Hijerena Ilay Seho?
Araka ny fahafantarantsika ny fientanan'ny tantara Koreana eo amin'ny tsenan'ny fahitalavitra, ny The K drama dia namorona ny mpankafy azy manokana, izay mitombo isan'andro. Raha mpankafy tantara Koreana koa ianao, dia ho tianao ity lahatsoratra ity. Toy ny ato amin'ity lahatsoratra ity, hijery tantara Koreana Tatsimo antsoina hoe You are My Spring. Nahazo fon'ny maro eny an-tsena ny tantaram-pitiavana. Notarihin'i Jung-Ji-Hyun ny fandaharana ary navoaka tamin'ny 5 Jolay 2021, ary navoaka voalohany tao amin'ny tvN. Miisa 16 ny seho.
Noho izany, andeha hojerentsika daholo ny fampisehoana:
Ity fampisehoana ity dia hahita mpilalao fototra telo izay nanomboka nipetraka tao amin'ny trano iray izay nisehoan'ny famonoana ianao. Nanomboka nijanona tao Gangneung nandritra ny fotoana fohy i Kang-da Jeong; nihevitra izy fa anisan’ny fony ny tranony. Rehefa nanomboka niasa ho mpitantana hotely izy dia nifindra tany amin'ny Gugu Building, izay nidirany tamina raharaha famonoana olona.
Ju Young-Do, izay mpitsabo ara-batana nanampy ny olona namono tena mba hiaina fiainana mahafinaritra indray. Amin'ity, hampahafantarina bebe kokoa miaraka amin'i Chae Jun, tale jeneralin'ny orinasa fampiasam-bola. Iza no raiki-pitia tamin'i Kang-Da Jeong, ary rehefa ela ny ela, dia naneho ny fihetseham-pony taminy tamin'ny fomba tsara izy tamin'ny farany.
Feno tantaram-pitiavana feno ny tantaram-pitiavan'izy mivady sy ny seho mampientam-po izay nahasarika ny mpijery ny tetik'ilay fampisehoana.
Raha te hijery bebe kokoa momba ny mpivady dia mila mijery ny fandaharana ianao ary mamaly ny fanontaniana tianao ho mpivady i Jeong sy Young, ary koa, rehefa avy nijery ilay sarimihetsika ianao dia afaka mamaha ny mistery eo amin'i Lan sy Chae.
Mampahafantatra ity seho ity Seo-Jun Hyun ho Kang-de Jeong, Kim-Dong Wook ho Ju young-Do, Yoon Park ho Chae Jun, ary mpiara-miasa maro hafa, izay nahasarika mpijery maro tamin'ny fihetsiny teo amin'ny tsenan'ny fahitalavitra.
Ny mpanangona famerenana toa an'i IMDb dia nanome naoty 7.7 amin'ny folo ny seho izay nifototra tamin'ny famerenan'ny mpitsikera 50. Izany dia mampiseho fa ny fampisehoana dia azo lazaina ho iray amin'ny famokarana tsara indrindra amin'ny fotoam-pivoriana, izay manana ny mpankafy azy amin'ny tsena ihany koa.
Navoaka voalohany tao amin'ny tvN ilay fandaharana taorian'ny nandefasana azy tao amin'ny KST tamin'ny 21:00 isaky ny alatsinainy sy talata. Hita ao amin'ny Netflix ihany koa ny andiany.
Ny tantara Koreana You are my spring dia azo raisina ho iray amin'ireo andiany tsara indrindra amin'ny fotoam-pivoriana, izay manana naoty tsara ihany koa avy amin'ireo mpitsikera ary nahasarika mpijery maro noho ny tantarany sy ny fihetsiny. Noho izany, raha mpankafy tantara K ianao na te hijery andian-tantara tantaram-pitiavana, dia manoro hevitra anao aho hijery ilay fandaharana indray mandeha.
Misy fanontaniana maro ao amin'ny lahatsoratra navelako ho anao; rehefa avy nijery ny seho ianao dia asio commentaire eo ambanin'ilay lahatsoratra.
Raha mila fanamboarana haingana kokoa sy fanavaozana mahaliana, tsidiho azafady ny anay tranonkala mba hanana hevitra momba ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra, lalao, sarimihetsika ary fanavaozana ara-teknolojia.
Silvinho Xavier dia manamarina ny ekipa ary manazava ireo safidy hafa amin'ny tapany faharoa
The Society Season 2: Zavatra Tokony ho Fantatrao!
boaty tv android ambony naoty 2016
fomba hahazoana robux maimaim-poana
hbo izao vs hbo max
kaody ps4 psn maimaim-poana 2015
alaina netflix amin'ny fitaovana be loatra
reddit toerana fampisehoana fahitalavitra tsara indrindra